I-Gíslaholt - Indawo yokuhlala esanda kwakhiwa enombono wentaba - I-Airbnb
I-Gíslaholt - Indawo yokuhlala esanda kwakhiwa enombono wentaba
Hvitarvallavegur 510, west, Iceland
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguMargrét
Indawo entsha entsha emnyama "yesimbo esidala" enembono entle yentaba. Kuphela iyure enye ukusuka eReykjavík.
Indawo yethu yokulala ikwindawo egqibeleleyo yokujonga i-Iceland esentshona, ummangaliso wendalo omangalisayo onje ngeengxangxasi ezintle, iingxangxasi zomkhenkce, umqolomba welava kunye neyona mithombo ishushu inamandla eYurophu.
Indawo ezolileyo yokubona izibane zaseMntla ngexesha lasebusika (ukuba iimeko zilungile). Inxalenye yonyaka, kuxhomekeke kwixesha lonyaka, unezilwanyana njengabamelwane ezifana neegusha namahashe.
UGíslaholt ligqwirha labucala ongabelani nalo nomnye umntu.
Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo nge-oveni kunye nefriji. Kukho igumbi elinye lokulala elineebhedi ezimbini ezikumgangatho ophezulu.
Kwigumbi lokuhlala kukho ibhedi epholileyo yesofa apho abantu ababini banokulala khona.
Iitawuli ezithambileyo kunye ne-bedlinen zibandakanyiwe kwixabiso. Sinikezela ngebhedi eyongezelelweyo kunye nebhedi yomntwana xa uyicela.
4.96 · Izimvo eziyi-119
Kuphela yi-15 min drive ukusuka eBorgarnes, ilali encinci apho unokuthenga khona uninzi lwezinto eziyimfuneko kwivenkile yokutya, kwisikhululo sokulinda, ikhemesti kunye nevenkile ethengisa utywala, fumana iindawo zokutyela zasekhaya, ikhefi, kunye nevenkile yezandla.
Iindawo ezinomdla ezikufutshane yiKrauma ibhafu yendalo kunye nerestyu. Deildartunguhver esona siphethu sishushu sinamandla eYurophu. UHraunfossar kunye noBarnafoss, uHúsafell kunye noLangjökull "Kumkhenkce"
Ngexesha lasehlotyeni ikhefi yasekhaya epholileyo eHvanneyri "Skemman".
Umbuki zindwendwe ngu- Margrét